Sọpụrụ 8, ezigbo mma nke onye nrụpụta China ruru Europe | Akụkọ akụrụngwa
Oge ụfọdụ gara aga, Huawei kpebiri imepụta akara nke abụọ nke aha ya bụ Honor. Kemgbe ahụ ọ na-ebupụta ngwaọrụ ndị na-atọ ụtọ n'ahịa, nke anyị nwere ike ịkọwapụta Sọpụrụ 6 gbakwunyere ma ọ bụ Na-asọpụrụ 7, nke mere ka ọ bụrụ otu n'ime ụdị ihe ịga nke ọma n'ahịa. Ugbu a bụ oge maka gị ịkpọsa mwepụta nke Europe nke ọkọlọtọ ọhụrụ.
Nke a bụ Na-asọpụrụ 8, nke anyị maraworị, n'ihi ngosipụta nke ụlọ ọrụ Huawei mere na United States na China. Site na smartphone a, anyị nwere ike ikwu na enweghị obi abụọ wayzọ iji nweta ngwaọrụ nwere oke mma yana nke nwere ọnụ ahịa adịchaghị ọnụahịa maka akpa ọ bụla.
Nke mbụ, anyị ga-eme nyocha sara mbara banyere njirimara na nkọwapụta nke Honor 8 a iji mara ụdị ọnụ anyị ga-enwe na aka anyị.
5,2-inch ihuenyo nwere mkpebi Full HD nke 1.920 x 1.080 pikselụ
Huawei Kirin 950 processor nwere isi asatọ (2.3 / 1.8 GHz)
32 ma ọ bụ 64 GB n'ime nchekwa, dabere na ụdị anyị họọrọ. N'ọnọdụ abụọ anyị nwere ike ịgbasa nchekwa a site na kaadị microSD nke 128 GB
12 megapixel sọrọ n'azụ igwefoto
Batrị 3.000 mAh nwere teknụzụ na-ebu ọnụ ngwa ngwa
Gam akporo 6.0 Marshmallow sistemụ arụmọrụ na EMUI 4.1 customization nwere ike
Nke a na-asọpụrụ 8 nwere ihuenyo nke na-ekwesịghị ekwesị maka ụdị ndị ọrụ niile na ọ bụ na ha nwere naanị 5.2 sentimita asatọ. N'oge na-adịghị anya gara aga nke a nwere ike ịbụ nnukwu ihuenyo, mana taa, etinyela "nkịtị" na sentimita 5.5, na-ahapụ obere nha maka ndị ọrụ na-achọ ihe ndị ọzọ.
N'ime ya bụ ihe na-egbu maramara na anyị hụrụ a Kirin 950 processor, otu ihe anyị nwere na Huawei Mate 8 na-aga nke ọma. Nkwado nke 3GB nke RAM enweghị obi abụọ na anyị ga-eche ihu na ngwaọrụ nwere arụmọrụ karịa arụmọrụ kacha mma.
N'ikpeazụ, anyị achọghị ileghara igwefoto azụ ya anya, maka nke Honor soro echiche ahịa kachasị ọhụrụ site na itinye igwefoto igwe abụọ 12-megapixel. Site na ya dualLED flash, f / 2.2 na autofocus, ogo nke foto ndị esee dị ka ihe karịrị ntụkwasị obi.
Tupu ịmalite ịma ọnụahịa na nnweta nke Honor 8 a, anyị enweghị ike ịkwụsị ịza ajụjụ maka atụmatụ nke ngwaọrụ mkpanaka a. Ma nke ahụ bụ Ọ nwere atụmatụ adịchaghị, nke dị n'ụdị ahịa dị elu nke ahịa ọ ga-adịkwa na agba dị iche iche nke kachasị dị mma ma na-adọrọ mmasị.
Ngwunye nke ọla bụ ndị ka n'ọnụ ọgụgụ na ahịa na Honor achọghị ịchụ maka ihe ndị ọzọ iji nye aka na-adọrọ mmasị na ọkọlọtọ ọhụrụ ya. Banyere imewe enwere ihe ole na ole anyị nwere ike ịkọwapụta ebe ọ bụ na onye nrụpụta China enwetagoro oke mma, ihe na-adịghị maka onye ọ bụla.
Dika onye mmeputa nke China kwadoro a Sọpụrụ 8 ọhụrụ a ga-adị na ihe karịrị mba 74. Na mbu, o gha agha n’ahịa di na sapphire acha anụnụ anụnụ, Pearl White, misnight Nwa na ọwụwa anyanwụ. Tụkwasị na nke ahụ, nnukwu uru bụ na ị nwere ike ịzụta ngwaọrụ mkpanaka a ugbu a site na nnyefe e mere atụmatụ n'etiti ụbọchị 1 na 2, n'ihi nnabata nkwupute na-akwụghị ụgwọ gụnyere ịzụrụ ọkọlọtọ Honor ọhụrụ a.
Ọnụ ya bụ euro 399 maka ụdị a nwere nchekwa dị n'ime 32 GB na 499 euro maka ụdị 64 GB. Nwere ike ịzụta Honor 8 ugbu a HERE n'ụzọ gọọmentị ma nata ya dịka anyị kwuru n'etiti ụbọchị 1 na ụbọchị 2 n'efu.
Honor na Huawei emeela ya ọzọ site na ịmepụta na imepụta ngwaọrụ mkpanaka nwere ezigbo ọmarịchaNjirimara na nkọwapụta dị elu nke ụfọdụ ọdụ kacha mma na ahịa yana ka ha na-enye ya na ọnụahịa ọnụ maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọrụ ọ bụla.
N'ezie, ọ bụ ihe na-akpali mmasị iburu n'uche na anyị na-eche ihu ngwaọrụ mkpanaka ahụ ọ nwere ike ịdị ka Huawei Mate 8, ọnụ nke dị n'ahịa ruo oge ụfọdụ. Nke a pụtara na ọ bụrụ na anyị amalite ịzụta nke Honor 8 a, anyị ga-enweta ọnụ, nke na-enye anyị nnukwu imewe na arụmọrụ dị mma, mana nke na-agaghị abụ nke kachasị ọhụrụ gbasara atụmatụ na arụmọrụ, ee, mkpuchi ọma ga ga-ezuru oke maka mkpa onye ọrụ ọ bụla.
Kedu ihe ị chere gbasara Honor 8 a nke enyere n'ihu ụnyaahụ na anyị mụtara ntakịrị ntakịrị na omimi taa?. Gwa anyị uche gị na oghere edebere maka ịza ajụjụ na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Sọpụrụ 8, ezigbo mma nke ndị nrụpụta China ruru Europe
Ọfọn! ebe o bu na 5.5 bu ihe kwesiri ??????? . 5 sentimita asatọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ime maka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu, ugbu a ndị na-emepụta ihe raara onwe ha nye iji meziwanye batrị ha
Ọ dị ezigbo mma mgbe ọ bịarutere na Peru na ego ole ka ọ na-eri